चामलको भात खाने रहर भएको कथा मेरो वास्तविक भोगाइ हो - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
गोवीन्द कोईराला (जयन्ते)सँग सम्वाद
नेपाल टेलिभिजनबाट विगत केही बर्षअघिदेखि प्रशारण हुदैं आईरहेको हाँस्य टेलिश्रृंखला भद्रगोलबाट एकाएक चर्चामा आएका कलाकार हुन गोवीन्द कोइराला । टेलिभिजनको पर्दामा ‘जयन्ते डाम्ना’ भनेर चिनीने यी पात्रको लेघ्रो तानेर ‘काका’ भन्ने थेगो र ‘हाहाहा’ गर्ने हाँसोले आम दर्शक स्रोतालाई तानेको छ । जयन्ते डाम्ना वास्तविक जीवनमा भने अत्यन्तै मिलनसार र सकारात्मक सोच राख्ने व्यक्तित्व हुन । सिन्धुलीमा जन्मिएर करिव एक दशक अघि काठमाडौं छिरेका जयन्ते करिव ६ वर्ष अगाडि देखि कलाक्षेत्रमा प्रवेश गरेका हुन । कलाकारिताको यात्रामा आफूलाई यहासम्म ल्याउन अर्जुन घिमीरे अर्थात भद्रगोलका पाँडेको सहयोग रहेको बताउने जयन्तेलाई भद्रगोलले नै चर्चामा ल्यायो । उनै भद्रगोल हाँस्य श्रृंखलाका रमाइला कलाकार गोवीन्द कोईरालासँग नेपालपाटीका लागि जनार्जन पौडेलले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ :
तपाइँलाई आम दर्शक /स्रोताले भद्रगोलको जयन्ते भनेर चिन्दछन, के यो नै तपाइँ अभिनित पहिलो टेलिश्रृंखला हो ?
आम दर्शक/स्रोता माझ मलाई चिनाउने हाँस्य टेलिश्रृंखला भद्रगोल हो तर मैले पहिलो अभिनय गरेको टेलिश्रृंखला भने ‘सिस्नुपानी झ्याम्मै’ भन्ने हो ,जसमा मैले १० भाग देखि १८ भाग सम्म विभिन्न रोलमा अभिनय गरेको थिएँ ।
कलाकारितामा लाग्ने प्रेरणा कसबाट पाउन’ भयो ?
म सानै देखि कलाकार बन्न चाहन्थें । मेरो भित्री मन देखि नै कलाकार बन्न पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो ।पछि ठूलो भएर काठमाडौ आएपछि अर्जुन घिमिरे (पाँडे ) र कुमार कट्टेल (जिक्रि) सँग भेट भयो । म अभिनय पनि सिकिरहेको थिएँ त्यसैले वहाँहरुले स– सानो रोल दिनुभयो । उहाँहरुकै साथ र सहयोगले अहिलेसम्म यो क्षेत्रमा टिक्दैछु ।
हिजोआज के के मा व्यस्त हुनुहुन्छ ?
आफ्नै व्यवसाय लगायत विभिन्न कामहरुमा व्यस्त छु । मैंले चाहेर पनि पुरा समय अभिनयमा दिन सकिरहेको छैन । यसमा विभिन्न व्यक्तिगत कारणहरु छन् । यतिबेला भद्रगोलमा मात्र संलग्न छु । बीचबीचमा मलाई थुप्रै म्युजिक भिडियोहरुमा काम गर्ने प्रस्ताव आएको थियो समय अभावका कारण त्यतातिर लाग्न सकिन ।
सानो पर्दा बाहेक ठूलो पर्दाको चलचित्रमा पनि अभिनय गर्नु भएको छ कि ?
मैले ठूलो पर्दाको चलचित्र ‘पुर्नजन्म’ र लालजोडीमा अभिनय गरेको छु जसमा मैले गरेको अभिनयलाई दर्शकले निकै रुचाउनु भएको छ ।
भद्रगोलको जयन्ते कसरी जन्मियो ?
अर्जुन घिमिरे(पाँडे) र कुमार कट्टेल(जिक्री)ले कथा लेख्ने क्रममा जयन्तेको न्वारान गराईदिनु भयो । पछि यसै नामबाट अभिनय गर्नु परेकाले भद्रगोलमा समाजको एउटा सोझो पात्रका रुपमा जयन्ते जन्मिएको हो ।
नेपालमा कलाकार भएरै बाँच्न सकिने अवस्था छ त ?
हरेकक्षेत्रमा दुःख त गर्नै पर्छ । यसमा पनि इमान्दारिताका साथ काम गर्ने हो भने कलाक्षेत्रमा लागेर पनि भोको बस्नु पर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन ।
बाहिरतिर जाँदा कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभएको छ नि ?
बाहिरतिर जाँदा सुरुमा त कसले चिन्छन् र जस्तो लाग्थ्यो । तर अहिले त केटाकेटी देखि बुढाबुढी सम्म सबैले कसैले जयन्ते आयो भन्छन कसैले देख्ने वितिक्कै उ जयन्ते डाम्नो भन्छन जिस्क्याउँछन् । रमाईलो अनि खुशि लाग्छ ।
देशको पछिल्लो घटनाक्रमलाई कसरी लिनु भएको छ ?
देश वास्तवमै पछिल्लो समय एकदमै अप्ठेरो मोडमा आएर उभिएको छ . राजनीतिक अस्थितरता कायमै छ संविधान निर्माण त भयो तर कार्यान्वयनमा कठिनाइहरु उत्पन्न भइरहेका छन् । देशमा अस्थिरता बढिरहँदा त्यसले मलाई मात्र होइन , सम्पूर्ण नेपालीलाई नै दिक्क बनाएको छ । यसले समग्र राष्ट्रलाई पनि असर पारेको छ । राजनितीक स्थिरता कायम गराउनु आवश्यक छ ।
अभिनयका क्रममा अविश्मरणीय क्षण भए बताउनुस न ?
भद्रगोलकै सुटिङ्ग कै क्रमको अविश्मरणीय घटना हो यो । पाँडे काकाले मलाई मरेको माछाले हिर्काउनु पर्ने रोल थियो । उहाँले माछाले हिर्काउँदा मेरो आँखा नजिकै निलो डोब नै बस्यो । करिव २ हप्ता सम्म ठिक नभएकाले पछिल्ला अभिनयमा मैले मेकअप नै गरेर सुटिङ्ग गर्नु परेको क्षणअविश्मरणीय बन्न पुगेको छ ।
तपाइँको जीवनको सुखद क्षण बताइदिनुस न ?
पछिल्ला दिनहरुमा भद्रगोलबाट थुपै दर्शक स्रोतमाझ चिनीने अवसर पाएँ । बाहिर तिर जाँदा पनि धेरै दर्शकहरुले ऊ ‘जयन्ते’ आयो भनेर जिस्क्याउँदा सधैं सुखद क्षणको अनुभुती गर्छु । कतै कतै त उ जयन्ते डाम्ना भन्छन भीडबाट जिस्काएर
तपाइँलाई कसैले ‘जयन्ते डाम्ना’ भन्दा रिस उठ्दैन ?
किन रिस उठ्नु नि त्यो मैले भूमिका निभाएको एउटा पात्र हो । जो निश्चल र सिधा छ फेरि हामी कलाकार भएपछि विभिन्न भूमिकामा देखिनु पर्छ । मलाई त्यही भूमिकामा दर्शक-स्रोताले मन पराइदिनुभएको छ यसमा मलाई रिस उठ्ने हैन खुशी लाग्छ ।
यहाँको भविष्यको लक्ष्य के हो ?
एउटा राम्रो कलाकार भएर देशको सेवा गर्ने नै मेरो जीवनको प्रमुख उद्येस्य हो ।
आफुलाई टेलिभिजनमा पहिलो पटक देख्दा कस्तो लाग्यो ?
रमाईलै लाग्यो तर,नढाँटी भन्नुपर्दाआफ्नो अभिनय आफैलाई मन नपरेको जस्तो लाग्यो । अहिले पनि मलाई त्यस्तै लाग्छ । मलाई मन नपर्ने भनेको आफ्नै अभिनय हो । यहाँ यस्तो गरेको भए हुन्थ्यो, यो भएन छ जस्तो लाग्ने अनि अप्ठेरो महशुस हुन्थ्यो र अझै पनि त्यस्तै हुन्छ ।
सिरियलमा जतिखेर पनि चामलको भात खाने रहर छ भन्नुहुन्छ, वास्तिविक जीवनमा पनि त्यस्तै त छैन नि ?
चामलको भात खाने रहर भएको कथा वास्तवमा मेरो वास्तविक भोगाइमा आधारित हो । यो पात्र म आफै थिएँ । आजभन्दा १५ वर्ष पहिला हाम्रो सिन्धुलीमा पनि समस्या थियो । चामलको भात खान चार्डपर्व नै कुर्नु पर्ने थियो । जे छ त्यही खाने चलन थियो । बोरामा प्याकिङ भएको चामल अहिले पो सबै ठाँउमा जान्छन् । नेपालका दुरदराजका धेरै स्थानहरुमा चामलको भात खान चार्डपर्व नै कुर्नुपर्ने अवस्था छ ।
कलाकारिता बाहेक के गनुृहुन्छ ?
कलाकारिता बाहेक म एउटा व्यवसायमा लागिपरेको छु । मेरो दाईहरुको व्यवसाय छ त्यसै व्यवसायमा संलग्न भइ वहाहरुलाई सघाउँदैछु ।
परिवारबाट कतिको सपोर्ट पाउनु भएको छ ?
एकदमै पाएको छु । म कलाकारितामा लागेकोमा मेरो परिवारका सबै खुशी हुनुहुन्छ। यसका साथै साथीभाईहरुबाट पनि राम्रो प्रतिक्रिया पाईरहेको छु ।
कुराकानीका लागि समय दिनु भएकोमा धन्यबाद ।
अन्तमा मेरा दर्शक स्रोताहरुमा आफ्ना कुरा राख्ने अवसर दिनु भएकोमा तपाईं र तपाईंको मिडियालाई पनि धेरै–धेरै धन्यबाद दिन चाहन्छु ।